Macluumadka tallaalka ee qaatayaasha iyo mutadawiciinta - Cunnooyinka wheels-ka
Xogta tallaalka ee loogu talagalay dadka qaata cunnada iyo kuwa ka shaqeeyaba
Maaddaama dadaallada tallaalka COVID-19 ay ka socdaan Minnesota, ilahaaga ugu fiican ee macluumaadka ugu badan ee hadda jira ee ku saabsan cidda u-qalanta iyo halka laga helayo tallaallada waa bogga tallaalka gobolka Minnesota.
Haddii aadan horey u helin, waxaad sidoo kale iska qori kartaa gobolka Isku xiraha Talaalka taas ayaa ku soo ogeysiin doonta markaad xaq u leedahay inaad hesho tallaal. Siyaabo kale oo dheeraad ah oo aad ballan ku yeelan karto waxaa ka mid ah waaxdaada caafimaadka, takhtarkaaga, farmashiyaha ama shaqo-bixiyahaaga.
Macluumaad dheeraad ah oo loogu talagalay dadka cuntada qaata
Cunnooyin badan oo qaatayaasha Wheels ayaa hadda xaq u leh tallaalada sababo la xiriira da'dooda ama xaaladaha caafimaad ee salka ku haya. Haddii adiga ama qof aad jeceshihiin xaq u leedihiin, laakiin aadan haysan ikhtiyaar gaadiid badbaado leh oo aad ku tagtaan ballanta, Khadka Xiriirka Sare wuxuu kaa caawin karaa 1-800-333-2433. Haddii aad qabtid su'aalo dheeri ah oo ku saabsan tallaalka iyo nabadgelyadiisa, fadlan iska hubi xaashidan macluumaadka oo ka socday Jaamacada Minnesota School of Farmashi.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan mutadawiciinta
Cunnada tabaruceyaasha Wheels ayaa lagu daray sida shaqaalaha lagama maarmaanka ah hoosta kooxaha cuntada samafalka. Tabaruceyaasha Cunnada ee Wheels ayaa isticmaali kara tilmaamaha soo socda markay buuxinayaan Isku xiraha Talaalka in lagu kala saaro inay yihiin shaqaale muhiim ah: Kajawaab “Adeegga Cuntada” ee warshadaha, “Iskaa wax u qabso” ama cinwaankaaga shaqo ee cinwaan shaqo, iyo “Meals on Wheels” ee loo shaqeeyaha. Weydiiso goobta tabarucaada deegaankaaga meesha aad ka qaadanayso cuntada si laguugu keeno dukumiinti caddaynaysa heerkaaga ah iskaa wax u qabso ku saabsan Cuntada.
Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato heerka uu hadda marayo tallaalka COVID-19 ee gobolka Minnesota, booqo websaydhka tallaalka.
17-kii Maarso 2021